Inkulumbuso yaseSamoa: Ukukhanyela utshintsho lwemozulu kububudenge
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Inkulumbuso yaseSamoa: Ukukhanyela utshintsho lwemozulu kububudenge
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • iindaba • abantu • Safety • Iindaba zaseSamoa eziziiNdaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Ezokhenketho lelona shishini likhulu eSamoa, kwaye ilizwe lamkela abakhenkethi bamanye amazwe abali-115,000 ngonyaka, kwaye utshintsho lwemozulu lubangela inkxalabo.
Ezokhenketho lelona shishini likhulu eSamoa, kwaye ilizwe lamkela abakhenkethi bamazwe aphesheya abali-115,000 ngonyaka. Phantse iipesenti ezingama-35 zeendwendwe zivela eNew Zealand, iipesenti ezingama-25 zivela kwiAmerican Samoa nakwamanye amazwe ePacific, iipesenti ezingama-20 zisuka e-Australia, kunye neepesenti ezisibhozo ezivela e-US. ISamoa ibekwe kuLwandlekazi lwePasifiki malunga nesiqingatha phakathi kweHawaii neNew Zealand.
Ukunyuka kwamanqanaba olwandle kunye nokhukuliseko lomngcipheko kusongela uluntu olusezantsi eSouth Pacific. Ezinye iziqithi ezincinci sele zinyamalele apho uninzi lweziqithi zijonga imiqondiso yokuqala yokuba utshintsho lwemozulu lunamandla okongamela iindawo ezisengozini.
Enye yezona nkokeli zisebenza ixesha elide eMzantsi Pacific, Inkulumbuso yaseSamoa uTuilaepa Sailele, uxelele indibano eyayise-Australia ukuba utshintsho lwemozulu "yinto eyoyikisayo" kwizizwe ezisesiqithini kwaye ukuba nayiphi na inkokheli yehlabathi ephikayo ukutshintsha kwemozulu ikhona kufuneka isiwe kwiziko labagula ngengqondo.
Ethetha kwiZiko laseLowy, itanki lokucinga elizimeleyo eSydney, uSailele ubongoze iAustralia ukuba isike nzulu kwimveliso yayo yekhabhoni ukunceda ukukhusela amazwe esiqithi sePasifiki. I-Australia isathembele kakhulu kumalahle ekuphehleleni amandla kwaye inezona nqanaba liphezulu zehlabathi ngomntu ongcolileyo kwi-greenhouse.
"Sonke siyazazi izisombululo, kwaye into eseleyo iya kuba sisibindi sezopolitiko, ubugxwayiba bezopolitiko, kunye nayiphi na inkokheli yala mazwe ekholelwa ukuba akukho tshintsho lwemozulu, ndicinga ukuba kufanele asiwe eluvalelweni," Watsho uSailele. "Usisidenge ngokupheleleyo."
Inkokheli yaseSamoa eyasebenza ixesha elide ikwatsho ukuba izimo zengqondo zase-Australia malunga noMzantsi Pasifiki ziye zaxhasa, kwaye wathi ngaphandle kokukhula kwempembelelo yase China kwezopolitiko nakwezorhwebo, inkululeko kunye nokuzimela kwamazwe engingqi kufanele kuhlonitshwe.